WAR DEG DEG: Rag ganacsato ah oo lagu dilay magaalada Gaalkacyo. Yaase dilay? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta WAR DEG DEG: Rag ganacsato ah oo lagu dilay magaalada Gaalkacyo....
WAR DEG DEG: Rag ganacsato ah oo lagu dilay magaalada Gaalkacyo. Yaase dilay?
Gaalkacyo (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya, in laba nin oo ganacsato ah galabta lagu dilay magaaladaasi, waxaana dilkooda ka dambeeyay nin la sheegay inay Isniintii shalay wada murmeen mid ka mid ah ganacsata, sida goobjooge u sheegay mareegta Halqaran.com.
Wararka ayaa sheegaya, in ninkan dilka ka gaystay Suuqa weyn ee Magaalada Gaalkacyo xilli uu mashquul ka jiray, waxaana la sheegay in dilka ka dib uu goobtaasi ka baxsaday.
Cabdicasiis Yuusuf oo ka mid ah ganacsatada Magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in ganacsatada la dilay uu midkood bakhaar ku lahaa Suuqa Gaalkacyo, halka midka kalena uu ka mid ahaa ganacsatada waratada.
“Labada nin ee la dilay waxaa la kala oran jiray Xasan Shiikhaalow iyo Ilkacase. Xasan wuxuu ka mid ahaa ganacsatada waratada ee Suuqa Gaalkacyo, halka Ilkacase uu isna ahaa ganacsade bakhaar ku leh Suuqa.” Ayuu yiri Cabdicasiis Yuusuf oo la hadlay mareegta Halqaran.com.
Sidoo kale, Cabdicasiis Yuusuf ayaa yiri, “Dilka waxaa gaystay nin ay shalay is qabteen Xasan, kaasoo ay qaraabo yihiin. Qori ayuu maanta soo qaatay, sidaas ayuuna ku dilay. Ninka la leeyahay Ilkacase waxaa haleeshay rasaastii loo waday Xasan.”
UPDATE: Maamulka gobolka Banaadir oo u hanjabay dadka wararka been abuurka ah ka faafiyay Duqa Muqdisho
XASAASi + DAAWO VIDEO: Xiddig iyo Seeraar oo Weerar culus ku Qaaday Sheekh Shariif iyo Xasan “Awooda aad sheegteen waxay Huwan tahay Qabiil”
Maamulka Hirshabelle oo ka hadlay dilka Nabadoon Qaloosh loogu geystay Muqdisho
WAR CUSUB: KENYA oo go‘aansatay in qaadkii ugu badnaa ay u soo dhoofiso Soomaaliya! (Ogow Ujeedka)!
Cabdiweli Gaas: Soomaaliya kama dhici karto doorasho qof iyo cod ah! +(Ogow Sababta)
WAR CUSUB: Muuday ”Waa muhiim in laga fekero halkii laga yimid”!
Wararka ka imaanaya Magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in dembiilaha uu u cararay dhinaca Koonfurta Magaalada Gaalkacyo, isla markaana ay socdaan dadaalo lagu doonayo in lagu soo qabto.
Si kastaba, suuqa weyn ee Gaalkacyo oo ku yaala barta kala qaybisa Koonfurta iyo Waqooyiga Gaalkacyo, oo Galmudug iyo Puntland ay ka kala arrimiyaan ayaa waxaa ka hawlgala ciidan isku dhaf ah oo labada dhinac laga soo kala xulay.
laba ganacsato lagu dilay gaalkacyo